रामकुमार शर्मl, सभासद् एवं केन्द्रीय सदस्य- एकीकृत नेकपा माओवादी
०	संसदीय समितिको सम्बन्धित कर्मचारीलाई आˆनै मुलुक फर्काउनुपर्छ भन्ने निर्णय त गर्‍यो तर
सरकारले यस विषयमा खासै चासो दिएको देखिएन नि ?
०	तपाईंले यस घटना सार्वजनिक गरेपछि भारतीय दबाबमा तपाईंलाई
सभासद्बाटै हटाउने तयारी भइरहेको छ भनिन्छ नि ?
०	तपाईंमाथि भारतीय दूतावासबाट जुन व्यवहार भयो, त्यसले प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने
देखिन्छ नि ?
०	जुन तपाईंले भारतीय दूतावासबाट आएको धम्की’bout बाहिर सार्वजनिक गर्नुभो, त्यसपछि
दूतावासबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छ कि छैन ?
०	यस घटनामा सम्बन्धित समितिका सभासद् मात्र एकजुट भए तर छ सय एक सभासद् नै एक
हुनुपथ्र्यो नि होइन र ?
०	अब अर्को विषयमा जाऔा, आगामी भदौ २ गते मुलुकले नयाा प्रधानमन्त्री पाउनेमा कत्तिको
विश्वस्त हुनुहुन्छ ?